Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘संविधान संसोधनका लागि सडक र सदन आन्दोलनमार्फत् दबाब’
राजेन्द्र महतो भन्छन्ः प्रदेश–२ मा मधेशी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ
खरो अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आइरहने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बिमलेन्द्र निधिलाई धनुषा–३ बाट पराजित गरेपछि झनै चर्चामा छन्।
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका निधिलाई निधिकै गृहजिल्लामा पराजित गरेका निधि विजय अभियान सकेर काठमाडौं फर्केका छन्। तिनै महतोसँग निर्वाचन परिणाम र मधेशकेन्द्रित दलहरुको आगामी योजनाबारे नेपालखबरका लागि आकाश क्षेत्रीले गरेको कुराकानीः
‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको आरोप लागिरहँदा तपाईको जित कसरी सम्भव भयो?
मैले नेतृत्व गरेको मधेश आन्दोलन नै मेरो जितको आधार बन्यो। मैले मधेशी जनताको अधिकारका लागि धेरै संघर्ष थिएँ। यो कुरा उनीहरुले थाहा पाएका थिए, त्यसैले मलाई भोट दिए। निधि–निधि भनेर केन्द्रमा निकै चर्चा भएको थियो।
तर मधेशीहरुको विरुद्धमा काम गरेपछि निधि होस् या फिदी, मधेशी जनताले कहाँ जिताउँछन्? जनताले त्यसलाई जिताएर देखाइदिए, जसले मधेशको पक्षमा काम गरेको थियो। त्यसलाई हराए, जसले मधेशको विरुद्धमा काम गरेको थियो।
मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यसपटक मधेशका जनताले बुलेटको जवाफ ब्यालेटबाट दिनेछन्। निर्वाचन परिणामले त्यही देखायो।
अब मधेशवादी दलहरु कुन राजनीतिक मुद्धामा केन्द्रित हुन्छन्?
मधेशवादी दलहरुले उठाएका धेरै राजनीतिक मुद्धाहरु अझै पुरा भएका छैनन्। तीमध्ये मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारु जनजातिको अधिकार स्थापित गर्ने र मधेश विकासका मुद्धाहरुमा अब हामी केन्द्रित हुन्छौं। मधेशीको पहुँच केन्द्रीय राजनीतिमा एकदमै न्युन भइरहेका बेला उनीहरुको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्‍याउने काममा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
मधेशमा छुट्टै मधेशवादी नेतृत्वको आवश्यकता छ?
मधेशीहरु अझैपनि पूर्णरुपमा नेपाली भएर बाँच्न पाएका छैनन्। त्यसको उदाहरण नेपालको संविधान–२०७२ नै हो। संविधान जस्तो कुरा पनि मधेश र मधेशीको हित विपरित निर्माण गरिन्छ र त्यसलाई संशोधन पनि गर्न मानिँदैन भने अरुको के कुरा गर्नु? त्यसैले, मधेश र मधेशीको अधिकारलाई नेपालमा स्थापित गर्न मधेशवादी नेतृत्वले आवश्यकता छ।
प्रसङ्ग बदलौं, प्रदेश–२ को प्रादेशिक सरकार कसरी गठन हुन्छ?
मधेश आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको प्रदेश–२ मा हामीले जित्नु भनेको मधेश आन्दोलनले जित्नु नै हो। त्यसैले हामी सबै मिलेर जनताको मनोभाव अनुसारको सरकार बनाउँछौं।
‘सबै’ भनेको को–कोसँग मिलेर हो?
चुनावका बेला हामीले निर्माण गरेको ‘मधेश गठबन्धन’ छँदैछ। प्रदेश–२ मा प्रादेशिक सरकार मधेशी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नै बनाउने हो। मधेशी जनताको हित मधेश आन्दोलनको पूर्णताका लागि मधेशी गठबन्धनकै सरकार निर्माण जरुरी छ।